Wararkii ugu dambeeyay doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Ololaha ka socda Muqdisho!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Wararkii ugu dambeeyay doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Ololaha ka socda Muqdisho!!
Wararkii ugu dambeeyay doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Ololaha ka socda Muqdisho!!
Jan 11, 2017WARAR
Previous PostSafiirka Imaaraatka ee dalka Afghanistan oo ku dhaawacmay qarax dhimasho badan geystay Daawo Sawirro! Next PostMadaxweynaha Ugandha Museveni oo dallacsiiyay wiilkiisa!!